Whirlpool nakubhavu: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka umlenze Izibuyekezo
Isici esibalulekile kakhulu ekulondolozeni impilo enhle ngokomzimba bayakhathazeka izinyawo.
Lo magazini esihambelana kokubili isigamu kwabesifazane nabesilisa lwesintu, ngoba ngesivinini zokuphila kwanamuhla kubangela esasizosheshisa nalabo nabanye. Abantu uzinike isikhathi bahambe amabanga amade in the isixazululo yezinkinga ezihlukahlukene, futhi eziningi amantombazane ungaphila kulempilo enhle - High Heels. Ngaphandle, umbono onjalo, yebo, umxhwele. Kodwa empeleni banalo muzwa imilenze ukhathele lapho kusihlwa izicathulo Slippers ukhululekile? Ukukhathala. Zanqwabelana. Egqinsiwe. Ngokuvamile unomphela.
Okukushoyo ikhaya ukuphumula
kudivayisi Ngempumelelo sokubuyisela wachitha in umsindo nsuku zonke befuna zamabutho, kanye ezimnandi ukuphumula ukwelashwa yilona khambi ephelele - thini ashisayo. Sekuyisikhathi eside Izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka alamathuluzi ayibange isaba yinkinga inkani, njengoba abakhiqizi abaningi ngangokunokwenzeka emzamweni ukuthuthukisa imikhiqizo yabo emakethe ukuncintisana endow izimfanelo zakhe ezinhle. Amadivayisi anjalo zinhle ngokubukeka, njengasezulwini owayephila design isitayela. Ziyakwazi kulula ukuyisebenzisa futhi ayidingi ulwazi ekhethekile. ukusebenza kwabo kutholakala ngisho nakulabo ungathandi noma abakwazi ukuxhumana imishini. Engingakusho nje iyokha amanzi, bese uvula idivayisi kunethiwekhi. Futhi-ke, bakhuthazwa ukuba ufunde imiyalelo okungenani kuvisisa bonke ubuchwepheshe amathuba isimangaliso.
Deck izihlalo, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ukuthi ayenziwa ukuxoxa abathengi kwalo mkhiqizo zenzelwe ukunakekelwa nsuku zonke zempilo yabo siqu. Lena iholide yangempela sezinyawo ukhathele futhi ithuba elikhulu hhayi kuphela uphumule, kodwa futhi impilo, ukuqinisa amandla ukubuyisela impilo.
Uyini ashisayo unyawo okugeza? Lena isitsha plastic yohlobo oluthile, ifakwe:
ama-apharathasi ngoba amanzi Ukushisa kanye nokugcina ukulawula lokushisa yayo ukhululekile;
aerator, ogama umsebenzi bazogcwalisa amanzi nge emoyeni;
Imibhobho esemzimbeni ngokufanele phansi pan nokwenza amanzi.
Ezinye thini ashisayo, inzuzo kanye nokulimala ukuthi bajabule nikhathazeke abantu impilo yabo, ifakwe Imibhobho esemzimbeni ezengeziwe, okuyinto wenabisa uhla amakhono abo.
Isici esibalulekile iyona umthamo okugeza. Nenani elikhulu, ngcono kuzoba kuyadingeka ukuze balondoloze izinga lokushisa kwe-heater amanzi. Mboza pan kumele ukuvikela Splashes ukuba ngemva kokuhlinzwa akudingeki ukwenza yokuhlanza.
Lapho uthenga okugeza hot kufanele bacabangele imininingwane eminingana: inkinobho control panel kufanele zitholakale ukuze ungenalo ukugoba lapho basuke ukushintsha. ke Kuyancomeka ukukhetha imodeli, lapho unyawo ungashintsha inkinobho noma elawulwa kude.
Umsebenzi oyinhloko eyenziwa ashisayo unyawo okugeza, - a massage ngezinyawo, ezivezwa isenzo elise ezansi idivayisi spikes ekhethekile. Abanye onobuhle anemisila ukutshopa ebusweni, lapho massage umphumela ikhiqizwa ngamaphuzu acupressure phezu amathe ezinyawo ayatholakala.
Massage engenziwa noma Bubbles of emoyeni noma emanzini Jets. Bobabili izinqubo ukuletha injabulo okuhle ngendlela engakholeki. Air, amandla vtalkivayas kukholamu amanzi, kudala kunyakaza enamandla engena ijule nezicubu. ukuchayeka okunjalo Kuvuselela ukugeleza kwegazi futhi normalizes umzimba. Ukuchayeka amanzi Jets, okuyinto ezidla kwengcindezi ethile kuye kwaba nomphumela omuhle hhayi kuphela imilenze ukhathele, kodwa nezalo lonke umzimba.
Hot unyawo okugeza, ukubuyekezwa mayelana namathuba akhuthaza idivayisi ewusizo ezifana ukuthola amakhasimende amaningi, kungabuye eline odonsa. Zakha ensimini iboniswa nezinqubo, ubuhlungu bemisipha namalunga, kanye nokuvulwa wonke umzimba. Ezinye beye esakhelwe izibani ngezansi-bomvu, ukukhanya okubonakala kahle esikhumbeni futhi kwandisa imisipha kuyaqina futhi kuthuthukisa ukugeleza kwegazi. whirlpools okunjalo, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ukuthi kukhona liyindaba esemqoka ekugqugquzelweni kwezempilo, ingasetshenziswa njengendlela egcwele amanzi, futhi ngaphandle kwalo: ezimweni zombili umphumela uzokhombisa ukuthi unalo igciwane.
inqubo Hydromassage Kunconywa ehlezi. Okokuqala, lokhu ukuma ngeke ukukhulisa nokujabulela zokwelapha eziphumulele. Okwesibili, amadivayisi enjalo eyenzelwe isisindo okusezingeni eliphezulu sime kuzo.
Jacuzzi, Hydro-massage okugeza: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Indlela massage ewusizo izinyawo? Le nqubo sekwande kakhulu ngoba ekhaya:
normalizes ukugeleza kwegazi emzimbeni;
kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela;
kuqinisa impilo yonke umzimba;
kususa yokujama tsi;
ilungisa ezicutshini futhi amaseli;
ngesivinini ekwelapheni catarrhal ukubonakaliswa;
aqede ubuhlungu bekhanda;
kunciphisa ubuhlungu bamalunga;
It ephumula imisipha nemisipha;
aqede izinhlungu zibe;
Isikhathi isilinganiso izinyawo obishini imizuzu 15-20. Kulokhu kwanele ukuthola inzuzo esiphezulu umzimba wakho. Emva inqubo imilenze enempilo kudingeka Sula eyomile ithawula wayesenza gcoba nge ukhilimu okunomsoco.
Ubhavu Izıshısayo: uzuze umzimba
Ukuze uthuthukise umphumela, kutuswa ukusebenzisa ezihlukahlukene ukwakhiwa yezimonyo: amafutha abalulekile, zezinkambi engamakhambi, igwebu okugeza nosawoti. Ngokwesibonelo, unyawo massage nge-lavender athobe imilenze futhi unciphise ukucindezeleka. Horse onsundu liphumelele amacala njalo umlenze edema. izimbali eziningana rosemary Kunconywa ukuze ungeze amanzi uma ukujuluka ngokweqile. Chamomile kuyasiza isikhumba ebucayi. Ukusetshenziswa amafutha abalulekile uzoguqula izinqubo ukunakekelwa kwezempilo endaweni emnandi aromatherapy kweseshini. By the way, amamodeli eziningi obishini zokugeza ifakwe ezitsheni ezimonyweni, okuyinto ngamakhasimende kuyinto isici elula kakhulu.
Ukugqama for imilenze
Impendulo evela kubalandeli Whirlpool, ngcono ithoni jikelele umzimba futhi sithuthukise kwegazi kuzosiza okungafani foot okugeza. Ukuze le nqubo, kufanele kube ambalwa emathileyi. Omunye kudinga ukugcwaliswa ashisayo, kwesibili - emanzini abandayo. Imilenze yanjalo esecwilisiwe kuqala elilodwa, khona-ke owesibili. Emva inqubo, okufanele izikhathi hhayi ningi than 2 ngesonto, iyadingeka ukoma, ome off ithawula.
Foot Whirlpool aqede hhayi kuphela ukukhathala, kodwa futhi unalo izimo ezithile zempilo. Kabanzi ukutshopa kuthinta imigomo obhekene nokusebenza kwezitho ezibalulekile.
Izimo for the hydromassage ikhaya
Hot unyawo okugeza, izinzuzo kanye nokulimala okuyizinto ezibalulekile isihloko intandokazi ekhaya eziningi ukusetshenziswa ayitholakali bonke abafisa ukuthuthukisa impilo yazo. izilonda fungal, imisipha ukulimala, komzimba nezinto, izilonda imilenze, ukuvuvukala - izici ukuthi kungase kudingeke ukunikeza massage. Ngokunakekela okukhulu Kunconywa ukuba asebenzise le nqubo ngesikhathi sokukhulelwa, kanye iziyaluyalu kwegazi. varicose emithanjeni, ubuhlungu emalungeni, isifo sikashukela kufanele njalo ubonane nodokotela.
Izimpendulo ezivela abathengi, kufanele ngaso sonke isikhathi ukuqapha impilo yabo ngemva kokuthatha okugeza. Lapho kubalulekile ukuba ayeke inqubo ukuwohloka.
Isifo sokuqaqamba kwamalunga we ngokuhlanganyela ehlombe
Ukwelashwa nokuvikelwa neuritis we emsipheni ebusweni
Laryngospasm ezinganeni: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela
ERussia, owasungula le yokuqala non-koda igazi glucose imitha Omelon
Isilinganiso Medical OneDoc.ru: usizo nemigudu yokuqinisekisa ikhwalithi
Toy-ihhashi efanele izingane yanoma yimuphi yobudala
Umuthi "Dolphin": ukubuyekezwa kanye umhlahlandlela esenzweni
Yekuchumana mayelana nendlela ukwenza yokutakula ku "Maynkraft"
Isimo sezulu umhlahlo isikhala: ukuvuleka elanga